भूगोल परिवर्तनले उदास तिङलावासीलाई छोएन् चुनावको रौनकले - आयो खबर
भूगोल परिवर्तनले उदास तिङलावासीलाई छोएन् चुनावको रौनकले
२०७४ मंसिर १० प्रकाशित ०८:३२
तिङ्लामा गरिएको स्थलगत रिपोटिङ र निर्वाचनको सेरोफेरोमा स्थानीय पत्रकारहरुसंग गरिएको कूराकानीमा आधारीत
मंसिर १०,काठमाण्डौ ।
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी संगै जोडिएको तिङ्लाका स्थानीयलाई चुनावको न कुनै उत्साह छ, न रौनक नै ।
सोलुखोलाको पानी एकतमासले बगिरहेको छ, अनि तिङलाका जनता आफनै किसीमले बसिरहेका छन् । बहुसंख्यक मानिसहरुको आम्दनीको श्रोत पशुपालन ,खेतीबारी र वैदेशीक रोजगार नै हो । गाउँमा मुश्कीलले युवा अनुहार देखिने तिङलामा छ त केवल रोग । छ त केवल भोक, अनि शोक ।
हो, यहाँका जनताहरुको एउटै निराशा र छट्पटी भनेकै वर्षौदेखिको आफनो भूगोललाई राज्य पुनरसंरचनाले निल्यो । घण्टौ लामो दूरीमा रहेको गाउँपालीकामा लगेर मिसाउदा आफूहरु अप्ठेरोमा परेको पीडा छ । र त दिनप्रतिदीन तिङलाली जनताको रोग,भोक र शोक वढाएको छ । त्यसैले त गाउँमा जोसुकै छिरेपनि स्थानीय बूढापाकाहरु, ”लौन बाबु, हाम्रो त बिल्लीबाठ नै भयो” यस्तै -उस्तै भनाई र मर्मस्पर्शी बेदनाहरु पोखिरहनछन्।
त्यसो त उनिहरुको छट्पटी सुनेर नसुने झै गरेर बसेका उपल्ला निकायले साँधेको मौनताको विरोध स्वरुप तिङलाका जनताले चुनावी गतीविधी नगर्ने भन्दै मौन बस्दै आए । र त्यो निरन्तरतालाई थाती राख्दै तिङ्लाली जनता पहिलो चरणको यो निर्वाचनमा चुपचाप घरमै बसे । र निर्वाचनको मौन विरोध गरिरहेका छन् । र त चुनाव उनिहरुकोलागी कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात झै बनेको छ यतिखेर ।
बस्तीमा हातले गन्न सकिने संख्याका घरहरुमा कि छन् त केवल वुद्धवुद्धा कि ससाना केटाकेटी र तिनका आमा । प्राय बुढ्यौली अनुहारमा रोगले सताउदै लगेको संकेतहरु स्पष्ट देखिन्छ । अनि सकि नसकी यताउता गरिरहेका कैयौं अनुहार । गाउँमा सोलु हाईड्रोले आशा गर्न सकिने आधारहरु बनाउँदै लगेपनि जनतामा खुशीको छनक उतिसारो भेटिन्न । रोजगारको लागी थुप्रै युवाहरु परदेशमा रमाईरहँदा आफनो बूढयौली उमेरमा सरकारी कामकाज गर्न धेरै टाढा धाउन पर्ने वाध्यताले हररात गाँजेको छ वुद्धवुद्धाहरुलाई । त्यसैले त आफनो भूगोललाई पायक पर्ने स्थानमा ल्याईदिने त्यस्तो मान्छे खोजीरहेका छन् ,जो साँच्चै तिङलाली जनताहरुकोलागी ईश्वर बनेर आओस् ।
वर्षौसम्म सल्लाको दियालो र टुकीको उज्यालोमा नै कैयौं हिउँद र वर्षा विताएका तिङलालीहरुलाई देश नयाँ संरचनामा गईसकेपछि विकासका लहर आउँलान् सुखका दिनहरु फिर्लान् भन्ने आशा थियो । तर सीमाङकनको विषयमा भने सोच्दै नसोचेको अवस्थाले उनिहरुलाई वेचैन वनाएको छ । के उनिहरुले आशा गरेको खुशी फेरि फिर्ला ?
तिङलाली जनताहरुको असन्तोषका सुस्केराहरु कम हुने कहिल्य ? सीमाङ्कनको विषयमा असन्तोष स्थानीयहरुको एउटै स्वर, “हामीलाई नजिकैको दूरीमा पर्ने नगरपालीकावाट हुत्याएर घण्टौं लामो यात्रापछि पुगिने ठाउँमा पुराईयो ” ।
त्यसैले त जस्ले चुपचाप यस पटकको चुनावमा समेत आफनो उपस्थीति जनाएनन् । जिल्लाका १२५ वटै मतदानस्थलमा शान्तिपूर्ण रुपमा मतदान भइरहे तिङलामा भने मतदान केन्द्रहरु सुनसान रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत नारायणप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रकाशित | २०७४ मंसिर १० प्रकाशित ०८:३२
कालिमाटीबाट ५२ स्टल खारेज, २५ लाई सफाइ
खाडी मुलुक र मलेसियासँग श्रम सम्झौता गर्न माग